Dumarka dabada ka kacsado xiliga galmada - iftineducation.com
iftineducation.com – Su’aal badan ay dadka is weydiiyaan oo ah gabdhaha qaar maxay u rabaan in dabada laga isticmaalo? su’aashaan dad badan ayaa la yaabayo laakin jawaab ayay u baahan tahay, waayahaan naagaha yurub ku nool soomaalida ah siiba dalka holland waxaa ku soo batay galmada futada inay rabaan naagta ma ku raaxaysataa wasmada dabada?
marka hore waa inaad ogaataa qofka wuxuu barto waa baaskiisa, marka hore gabadha tijaabo ayay ku gashaa sheekadaas ama waxay ka arkaysaa filimada wasmada naagaha oo dabada laga fuulayo markaas ayay is dhahaysaa adigana tijaabi,
marka ay tijaabiso marka hore xanuun ayay kala kulmaysaa marka xanuunkaas waxaa laga yaabaa inay meesha dhiig keento ama dilaacdo,
waayo futada aad bay u yar tahay siilka oo kale ma aha oo dhacaan keenayo, dhaawacaas marka uu raysto cucun ayay keenaysaa,
kaddib waxay rabtaa gabadha in gadaal laga cuno,
macaan ayay ka dareemaysaa waxay sii rabtaa in biyaha loogu shubo, daroogo ayay ku noqonaysaa kama hari karto, marka futada laga taabto dabadeeda way isfuraysaa dareen ayay yeelanaysaa, naagaha yurub ku nool aad bay u og yihiin sheekadan.
cudurka si dhaqsi ayaa laysaga qaadi karaa galmada futada, siilka dabada ayaa ka daran. waxaa la dhahaa dumarka futada shuunka ka leh ayaa ka helo cunida gadaal.
Galmada gadaal ma lagu raaxaystaa
raaxada dabada ma saxbaa
macaanka futada ma daran yahay
raaxada badhida ma dhab baa
jawaabta waa inaad ka fogaataa